Iyo IP kero 192.168.8.1 inoshandiswa kunyorerana mukati memunhu network ine akasiyana masystem. Iyo inoshandiswa zvakare kana uchitanga maitiro ekuisa mukati kutsanangura maturusi maturusi. Kuti uwane iyo 192.168.8.1 isa iyo Ip mune kero bar yewebhu browser yako, kana tinya iyi link iripazasi.
Ipo iri yepamhepo network, zvinoreva kuti inogona kunge iine pre-muridzi panguva imwe chete muhurongwa hwehurongwa mumatare akasiyana. MaPC asina network yekubatanidza anofanirwa kukwirisa yega yega internet TCP kana IP protocol.
Logins ye 192.168.8.1
Sei Login kuna 192.168.8.1?
Iyo IP kero yakakosha kana iwe uchida kupinda mukati kune yako router. Nhanho yekutanga ndeyekuwana mamwe mabhurawuza ewebhu nekuisa iyo https://192.168.8.1 batanidza mubrowser URL bhokisi izvozvi pfuurira pane 'pinda key.
Iwindo idzva rinovhura iro rinokukurudzira kuti upinde maID. Iwe unozobva washandisa iwo ekupedzisira login diploma kuti uwane kupinda kune iyo router interface.
Mushure mokunge nzira yekupinda iri kubudirira, iwe uchaendeswa kune peji rekutanga re router. Mune iyo admin pani, iwe unogona kugadzirisa akati wandei masetingi kuti aenzane netiweki yako & chengetedzo zvakafanotaurwa.
Kusiyanisa yako router IP kero haina kukurudzirwa nguva dzose kana ichiitwa neyakadzidza nyanzvi.
Wakanganwa IP Username nePassword Kero?
Kana iwe ukakanganwa iyo 192.168.8.1 Username nePassword ipapo unogona kutsvaga Chinyorwa / Bhokisi reRouter. Iwe unogona kutsvaga yedu router runyorwa rwemazita emashandisi uye mapassword.
Kugadzirisazve iyo Router
Kana iwe wachinja default username / password uye wakanganwa nezvayo, iyo chete nzira yekudzoreredza kuwana ndeyekugadzirisazve iyo router kune yakasarudzika kumisikidza, iyo inodzosera shanduko dzese kune default default marongero. Kugadzirisa router yako:
Tora chinhu chakanangana, senge tsono kana pepa clip, uye tsvaga bhatani rekumisazve pane yako router.
Iwe unowana diki rakavanzika bhatani. Dhinda uye bata bhatani nechinhu chakanangana kwemasekonzi gumi kusvika gumi neshanu.
Izvi zvinodzosera shanduko dzese dzakadzorerwa kune dzekutanga, kusanganisira zita rekushandisa / password rawakachinja. Iwe unogona ipapo danda mukati uchishandisa yako default default zvitupa.
Zvakajairika pane imwe nhanho kusangana nematambudziko akasiyana neako router. Kana iwe usingakwanise kufamba kupfuura iyo yekuvhara skrini, iwe unofanirwa kuyeuka zvimwe zvinhu. Tarisa kuti internet inogara yakagadzikana uye haina kuchinja. Imwe sarudzo ndeye kushandisa Prompt Command kuti usarudze default gateway. Iyo isiriyo kero ye IP iwe yaunogona kushandisa kuwana iyo yekushandisa interface. Iwe unogona zvakare kubata weinternet sevhisi webasa kuti uwane rumwe rubatsiro.
'192.168.8.1'yakavanzika IP kero. Iyi ndiyo inozivikanwa IP kero semuenzaniso '192.168.0.1' & '198.168.0.1' sezvo iine mashandiro akafanana neayo easara 2 achiri iwo chete musiyano ndewekuti '192.168.8.1' haishandiswe ne huwandu hwemakambani e router. Makambani akadai seMediaLink, Huawei anoshandisa kero iyi yeNetocol yeProtocol.
Iwe unofanirwa kuziva kuti mairaira ese anosanganisira maviri akasiyana marudzi eIP kero. Kero yeIP yakacherechedzwa kunetiweki yemuno inonzi LAN IP kero & iyo yese inopihwa nemodem inonzi WAN IP kero. IP kero '2' inowanzo shandiswa kuwana kunoshanda kweiyo router. Iyi yega IP kero inoshandiswa pakumisikidza kweye netiweki chishandiso
Pakutanga maitiro ekutsvaga iyo IP kero ye router.
Kutanga, batanidza yako router kune PC kana chero chishandiso nenzira kwayo. Iwe unofanirwa kuziva kuti kuvhura router admin pani iwe yaunoda kuti ubatanidze kune iyo router nenzira kwayo. Uye iwe haudi chero mhando yeinternet yekubatanidza yeizvi.
Saka, iwe unofanirwa kushandiswa kune iyo IP kero ye router yako. Unogona kuziva iyo IP kero ye router yako nekushanyira rairo yekuraira paLaptop.
Nzira dzakasiyana dzekushanyira 192.168.8.1 IP Kero
Iwe unogona kunyange kushandura iyo router IP kero chero nguva mune nzira mbiri kungave nekuvhura yakatarwa setup CD imwe nekushandisa web- interface. Izvo zvakakosha kune vazhinji vedu sezvo vazhinji vatengi vachida kuona kuti hapana chero 2.l kero inopesana nechero imwe kero yedhivha. Kana chero munhu akanganwa yavo yazvino IP kero, saka iye kana iye anogona kumisazve iyo router & ipapo chinhu chose chinozotangwazve kutadza. Uye zvakare, chero munhu anogona kutsvaga yake / yake yakagovaniswa IP kero nekungotsvaga "yangu IP" munzvimbo yeGoogle yekutsvaga. Zvirokwazvo, inodzokera kune yako yakagovaniswa IP kero.
Panguva ino enda kune yako default browser kana imwe bhurawuza rakasiyana wobva wapinda mune kero bar IP https://192.168.8.1 munzvimbo yekero yebrowser. Izvi zvinokutungamira kune imwe saiti & kukupa iwe kupinda kuti upinde mukati kune iyo router admin pani.
Pano, iwe unofanirwa kunyora zita rekushandisa uye password ye router yako kuti upinde yako router admin pani iyo iwe yaunogona kugadzirisa akawanda sarudzo senge Proxy, chengetedzo sarudzo, samambure manejimendi, WLAN marongero, router software & nezvimwe zvakawanda.
Kana iwe ukasarangarira iro reZita reZita & Password Router zvaunofanira kuita?
Vanoverengeka vanhu vangangodaro vasayeuke yavo yemazita & password. Naizvozvo pane tsananguro yeavo vakadzora yavo zita rekushandisa & password.
Panogona kuve nenyaya yekuti iwe haurangarire mazita evashandisi & mapasipoti. Mumamiriro ezvinhu akadaro, iwe unofanirwa kuivhima pane raidhi kodhi pamwe neiyo router's akateedzana nhamba & yekunyorera kero.
Imwezve kesi inogona kunge uri iwe ungangodaro wakundikana kuyeuka yako yekudarika Nekudaro, iwe unofanirwa kuseta patsva marongero eakavanzika nekiyi yakavanzika yekumisazve pane iyo router.
Imwe nyaya ingangove yekuti iwe hauna kumbobvira wachinja yako rauta yekuisa zvitupa zvekuti iwe ungatsvage yako router's default login MaID pamambure.
Iye zvino kana iwe uchiziva nezve rauta rekupinda, iwe unogona kunyora muma router ako maID pane peji rewebhu & ipapo iwe unowanikwa kune iyo router admin pani.
Iwe unogona zvakare kumisikidza iyo router newebhu-based setup peji rekutanga.
Mukupedzisira, iwe wakatsanangura akati wandei mapoinzi nezve iyo 192.168.8.1 Internet Protocol kero. Pane ruzivo rwakawanda pane ma routers, isina waya modemu, IP kero, & nezvimwe zvakawanda zvakapihwa muchikamu ichi. Iyi IP kero ichakubatsira iwe mukugadzirisa iyo Broadband network pamba pasina kusangana nematambudziko akawanda. Ndinovimba izvi zvaibatsira kune imi mese kuwana yako rauta network uye zvirokwazvo yakawedzera ruzivo rwako pane IP kero.